दैनिक बाइबल पढाइ आज २th अक्टुबर २०१ | | प्रार्थना अंकहरू
घर बाइबल पढ्ने योजना दैनिक बाइबल पढाइ आज २th अक्टुबर २०१।
हाम्रो दैनिक बाइबल पढाइ २ इतिहास १:: १-१-2, २ इतिहास १:: १- 17-1 बाट लिइएको हो। पढ्नुहोस् र धन्य हुन।
दैनिक बाइबल पढाइ
1 तब उनका छोरा यहोशापात उनीपछि नयाँ राजा भए।2योशियाहले यहूदाका सुदृढ शहरहरूमा फौजहरू पनि राखे। उनले यहूदा र एप्रैमका शहरहरूमा सैनिक दल राखे जसलाई तिनका पिताले लिएका थिए।3परमप्रभु यहोशापातका साथ हुनुहुन्थ्यो किनभने तिनी आफ्ना पुर्खा दाऊदले अनुसरण गरेका थिए।4तर आफ्नो बुबाको परमेश्वरले खोजे, र उहाँका आज्ञाहरूमा हिंडे, र इस्राएलका कर्महरु पछि छैन। Therefore यसकारण परमप्रभुले उनको हातमा राज्य खडा गर्नुभयो। यहूदाका सबै मानिसहरूले यहोशापातलाई उपहारहरू ल्याए। ऊसित धेरै सम्पत्ति र सम्मान थियो।5अनि आफ्नो हृदय प्रभुको तरिका मा उठाएर थियो: यसबाहेक उहाँले उच्च स्थानहरू र बगैंचाहरु यहूदाका बाहिर टाढा लगे। His आफ्नो शासनको तेस्रो वर्षमा उनले आफ्ना शासकहरू, बेन-हिल, ओबद्या, जकरिया, नथनेल र मीकायालाई यहूदाका सहरहरूमा सिकाउन पठाए।6यहोशापातले शमायाह, नथन्याह, जबदियाह, असाहेल, शमीरामोत, जोनाथन, अदोनियाह, तोबियाह, तोब-अदोनियाहलाई लेवीहरू पठाए। एलीशामा र योराम पूजाहारीहरू थिए।7अनि तिनीहरूले यहूदाका सिकाउनुभयो अनि तिनीहरूलाई प्रभुको व्यवस्थाको पुस्तक थियो, र सबै यहूदाका शहर भर बारेमा भयो, र मानिसहरूलाई सिकाउनुभयो। 8 अनि प्रभुको डर तिनीहरूले यहोशापात विरूद्ध कुनै युद्ध गरे भनेर यहूदाका बारेमा राउन्ड थिए कि मुलुकमा सबै राज्यहरू मा परे।9केही पलिश्तीहरूले यहोशापातलाई उपहारहरू ल्याए। अरबीहरूले उसको बगाललाई सात हजार सात सय भेडा र सात हजार सात सय बाख्राहरू लिएर आए। 10 यहोशापात अत्यन्तै शक्तिशाली भए। उनले यहूदाका किल्लाहरू अनि भण्डार शहरहरू निर्माण गरे। 11 यहूदाका शहरहरूमा उनको धेरै व्यापार थियो। र योद्धाहरू पनि वीर योद्धाहरू यरूशलेममा थिए। 12 तिनीहरूको पिता-पुर्खाहरूको परिवार अनुसार गन्ती गरिएको यहूदाका हजार सेनाहरूका हाकिमहरू। अदन्ना सेनापति थिए। उनीसित 13 सैनिकहरू थिए। 14 अनि उसको छेउमा कप्तान योहानन अनि तिनका साथमा 15 थिए। 16 उसको छेउमा जिक्रीका छोरा अमासियाह थिए। उनीसँगै दुई लाख सेनाका वीर वीरहरू पनि थिए। १ And बिन्यामीनका; एलियादा एक वीर योद्धाहरू थिए। तिनीसँग धनुका र ढाल सहित 17 मानिसहरू थिए। 18 अनि यहोशापातका अर्को एक सय अठ्ठीस हजार सेनाका निम्ति युद्धका निम्ति तयार थिए। 19 ती मानिसहरूले राजालाई पर्खिरहेका थिए, जसलाई राजाले यहूदाका सुदृढ शहरहरूमा राखेका थिए।
1 यहोशापातले धेरै सम्पत्ति र सम्मान पाए। आहाबसँग तिनी घनिष्ट भए।2केही वर्ष पछि उनी आहाबसँग सामरिया गए। आहाबले यहोशापात अनि तिनी सित भएका मानिसहरूका लागि धेरै भेडा र गाईहरू बलि चढाए। आहाबले रामोत-गिलाद माथि आक्रमण गर्न उसलाई उत्साहित तुल्याए।3आहाबले इस्राएलका राजा यहोशापातलाई भने, “तपाईं म सित रामोत गिलाद माथि आक्रमण गर्न जानु हुन्छ? शाऊलले उत्तर दिए, “म तपाईं जस्तै हुँ र मेरा मानिसहरू तिम्रा मानिसहरू जस्तै। हामी युद्धमा तपाईंको साथ दिनेछौं।4यहोशापातले आहाब इस्राएलका राजालाई भने, “आज बिहान परमप्रभुका वचनमा कुरा गर।5यसकारण इस्राएलका राजाले XNUMX अगमवक्ताहरू जम्मा गरे अनि तिनीहरूलाई भने, “हामी रामोत-गिलाद शहर युद्ध गर्न जानु पर्छ कि पर्दैन?” तिनीहरूले भने, “उठ! किनभने परमेश्वरले त्यसलाई राजाको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ।6तर यहोशापातले भने, “के यहाँ अरू परमेश्वरका अगमवक्ताहरू छन्?7इस्राएलका राजाले यहोशापातलाई भने, “एकजना मानिस छ जसको बारेमा हामी परमप्रभुलाई सोध्न सक्छौं। तर म उनलाई घृणा गर्दछु। उसले कहिले पनि मेरो निम्ति राम्रो कुरा गरेको छैन, तर सधैं सँधै दुष्ट कुरा नै गर्दछ। ती मानिस इमलाका छोरा मीकाया हुन्। तर यहोशापातले भने, “राजाले यसो भन्नु हुँदैन।” 8 तब इस्राएलका राजाले एक जना अधिकारीलाई बोलाए र उनलाई भने, “चाँडो इमलाको छोरो मीकायालाई ल्याऊ।9तब इस्राएलका राजा र यहोशापात यहूदाका राजा र यहोशापात दुवैले आफ्नो सिंहासनमा बसे अनि तिनीहरूले आफ्ना पोशाक पहिराइदिए। तिनीहरू सामरियाको प्रवेशद्वारको छेउमा एकान्त ठाउँमा बसे। सबै अगमवक्ताहरू तिनीहरूको सामु उभिएका थिए अनि अगमवाणी गरिरहेका थिए। 10 सिदकियाहले केन्नाहको छोरा योशियाहलाई फलामका सींगहरू बनाए अनि भने, “परमप्रभुले भन्नु भएको छ, 'तिनी यी चीजहरू ध्वंश पार्ने छौ अनि तिनीहरूलाई नष्ट पार्नेछन्। 11 सबै अगमवक्ताहरूले अगमवाणी गरे। तिनीहरूले भने, “रामोत गिलाद शहरमा जानु होस् र सफलता प्राप्त गर्नुहोस किन? किनभने परमप्रभुले यसलाई राजाको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ।” 12 मीकायालाई बोलाउन गएका दूत एलीशालाई भने, “हेर! अगमवक्ताहरूले भनेका कुरा सुनेपछि राजा खुशी हुन्छन्। यसकारण तपाईंको शब्दहरू पनि यस्तै होऊ जस्तो तपाईंले राम्रो कुरा गर्नु हुन्छ। 13 मीकायाले उत्तर दिए, “परमप्रभु जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सत्य भएझै जो म ईश्वरले भनेको छु। 14 जब राजा आहाबले राजा आए, राजाले उनलाई भने, “मीकाया, हामी युद्धको लागि रामोत-गिलादमा जाऊँ कि नजाऊँ? तब एलीशाले भने, “जाऊ अनि सफल होऊ। ती सबै तिमीलाई दिइनेछ।” 15 तब राजाले उनलाई भने, “कति पटक म तिमीलाई भन्नु छ? के तिमीले मलाई परमप्रभुको नाउँमा सत्य बोल्दैनौ?” 16 “मैले इस्राएलका सबै मानिसहरूलाई पर्वतहरूमा छरिएको देखें। तिनीहरू भेडाहरू बिनाका भेडाहरू जस्तै थिए। तर परमप्रभुले भन्नुभयो, 'तिनीहरूका कुनै अगुवा छैन। त्यसकारण तिनीहरू सबै शान्तिसित घर फर्किए। 17 इस्राएलका राजाले यहोशापातलाई भने, “मैले तपाईंलाई भनेको थिएँ कि उसले मेरो निम्ति नराम्रो अगमवाणी गर्ने छैन, तर उसले अगमवाणी गर्ने छ।” १ he उसले फेरि भन्यो: “यसकारण परमप्रभुको वचन सुन। मैले परमप्रभुलाई उहाँको सिंहासनमा बसिरहेको देख्नु भयो, र स्वर्गका सम्पूर्ण सेनाहरू उहाँको दाहिने र देब्रेपट्टि उभिरहेका थिए। 19 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “इस्राएलका राजा आहाबलाई कसले फसाउँला जसमा कि उसले रामोत गिलाद माथि आक्रमण गर्न सक्छ? एकले भने यस तरीकाबाट बोल्दै, अनि अर्कोले पनि यस तरिकाबाट भने। २० तब एउटा आत्मा आए र प्रभुको सामने उभिएर भने, 'म उसलाई फसाउँनेछु।' प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, “त्यसोभए, के हुन्छ? 21 एलीशाले भने, “म बाहिर जान्छु र आहाबका अगमवक्ताहरूका मुखमा झूँठो बोल्ने आत्मा हुनेछु।” प्रभुले भन्नु भयो, 'तँ आहाबलाई छल गर्नमा सफल हुनेछस्। तिमी सफल हुनेछौ। बाहिर जाऊ अनि यसो गर।' २२ अब हेर, परमप्रभुले तिम्रा भविष्यवक्ताहरूको मुखमा झूँठो बोल्ने आत्मा हालिदिनु भएको छ, र परमप्रभुले तपाईंको विरूद्धमा नराम्रो कुरा भन्नुभएको छ। 23 सिदकियाह, केनानाको छोरा आए र मीकायालाई गालामा हिर्काए। सिदकियाहले भने, “परमप्रभुका आत्मा मबाट कुरा गर्न तपाईं कहाँ जानु भयो? 24 मीकायाले उत्तर दिए, “हेर, त्यस दिन तिमीले आफ्नो भित्री कोठामा लुक्नको निम्ति भेट्नेछौ। 25 तब इस्राएलका राजाले मीकायालाई पक्रे र उनलाई शहरका प्रशासक आमोन र राजाका छोरा योआश कहाँ लगे। २ say भन, 'यो कुरा राजाले भनेको छ, यस साथीलाई झ्यालखानामा हालिदेऊ र उनलाई पीडाको रोटी र पीडाको पानी पिउँ, र म शान्तिको बाटोमा फर्केर नआएसम्म। 27 मीकायाले उत्तर दिए, “यदि तिमी शान्ति साथ फर्कन्छौ भने तब परमप्रभु म द्वारा बोल्नु भएको छैन। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “सुन! 28 यसकारण इस्राएलका राजा र यहूदाका राजा यहोशापात रामोत गिलाद माथि गए। 29 इस्राएलका राजाले यहोशापातलाई भने, “हामी लडाईंका निम्ति तयारी गर्ने छौं। तर तिमी आफ्नो पोशाक लगाऊ। तब इस्राएलका राजाले आफ्नो रूप परिवर्त्तन गरे। तिनीहरू युद्धमा गए। 30 अरामका राजाले आफ्ना रथका सेनापतिहरूलाई आदेश दिए। सेनापतिले भनेः “ठूला र ठूला व्यक्तिहरू सित लडाइँ नगर्नुहोस्। इस्राएलको राजासँग मात्र युद्ध गर।” The१ जब रथका सेनापतिहरूले यहोशापातलाई देखे, तिनीहरूले भने, “ती इस्राएलका राजा हुन्।” यसकारण यहोशापात कराए अनि परमप्रभुले उसलाई सहायता गर्नु भयो। तर परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई उहाँबाट टाढा हुन लाउनु भयो। 32 यो रथहरू को कप्तान यसलाई इस्राएलका राजा थिएन कि कथित गर्दा, कि पारित गर्न, आए लागि, तिनीहरूले फिर्ता फेरि उहाँलाई पछि लाग्दा गरियो। And 33 एक जना मानिसले आफ्नो धनुर्धारीले धनु ताँचे र इस्राएलको राजालाई हानीको जोडीको बीचमा हिर्काए। यसकारण, उसले आफ्नो रथलाई भन्यो, “फिरऊन, तपाईंले मलाई सेनाबाट बाहिर लैजानुहुन्छ। म घाइते छु।
अघिल्लो लेखमादैनिक बाइबल पढाइ २th अक्टुबर २०१।
अर्को लेखमादैनिक बाइबल पढाइ २th अक्टुबर २०१।
२० अलौकिक अवधारणाको लागि प्रार्थना बिन्दुहरू